नेपालका सन्तोष साह बिबिसीको ‘मास्टर सेफ प्रोफेसनल युके’को सेमिफाइनलमा « Nagarik Khabar
नेपालका सन्तोष साह बिबिसीको ‘मास्टर सेफ प्रोफेसनल युके’को सेमिफाइनलमा
प्रकाशित मिति : 20 November, 2020 9:13 am
लण्डन । नेपालका सन्तोष साह बिबिसीबाट प्रसारण हुने विश्वकै प्रतिष्ठित टिभी रियालिटी शो ‘मास्टर सेफ प्रोफेशनल युके प्रतियोगिता २०२०’ को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । नेपाली खानाका लिएर सहभागी भएका सन्तोष पुगेका हुन् । बिहीबार बेलुका बिबिसीबाट प्रसारण गरिएको उक्त प्रतियोगितामा सन्तोष सेमिफाइनलका लागि छनौट भए ।
सन्तोषले ‘स्टार्टर’ मा टिमुर स्पाइस्ड्अ, क्ट्पस विथ सिस्नु, आलुको तरकारी, भाङको चट्नी र कर्कलोको पात बनाएका थिए । त्यस्तै, मेन कोर्समा उनले पोलेको भेडाको मासु, खसीको मासुको झोल, बेथेको साग, गहुँको रोटी र माछा, तामाको अचार लगायतका परिकारहरु बनाएर बेलायतका प्रख्यात ‘फुड क्रिटिक’ हरु टम पार्कर र ग्रेस डेन्टलाई चखाए ।
सिरहा कर्जन्हवामा जन्मिएका सन्तोष पारिवारिक एवम् आर्थिक अवस्थाका कारण सानै उमेरमा रोजगारी खोज्दै भारत छिरेका थिए । तर आफ्नो सहस र मिहिनेतका कारण ‘किचन पोर्टर’ बाट रोजगारी थालेका साहले दश वर्षभन्दा कम अवधिमा ‘इन्सटिच्यूट अफ क्याटरिंग एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट’बाट ‘डिप्लोमा इन होटल एण्ड क्याटरिङ म्यानेजमेन्ट’ कोर्समात्र गरेनन्, भारतीय कम्पनीमा करिब ८० कामदारको हेडसमेत बन्न पुगे । सन् २०१० को अन्त्यतिर ‘वर्क पर्मिट’मा लन्डन उत्रिएपछि शुरुका केही वर्ष उनले प्रतिष्ठित इन्डियन रेष्टुरेन्ट तथा होटलमा काम गरे । करिब दुई दशक भारतीय कुजिनमा काम गरे पनि अहिले नेपाली खानालाई विश्वसामू पु¥याउने लक्ष्य लिएर उनी अघि बढेका छन् ।
नेपाली खानाको स्वाद तथा सेफ सन्तोषले देखाएको आकर्षक प्रतिभाका आधारमा सन्तोषले अघिल्लो चरणमा जाने अवसर प्राप्त गरेका हुन् । यसअघिको प्रतियोगितामा पनि सन्तोषले तीनजना प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछि पार्दै अघि बढेका थिए । यसअघि पनि उनले पोलेको माछा, आलुको अचार, करेला र टमाटरको चट्नी तथा ढुम्रीभित्र आलुको अचार राखेर जजहरुलाई चखाएका थिए । त्यसबेला पनि स्टार सेफ मोनिकाले करेलाको चट्नीलाई एउटै चट्नीभित्र पाँच प्रकारको स्वाद भएको बताउंदै ‘स्टार चट्नी’ को उपनाम दिएकी पत्रकार नरेन्द्र बस्नेतले जनाएका छन् ।
जीवनरक्षक खोप अत्यधिक मुनाफा कमाउने माध्यम बन्नु हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली (भिडियोसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण मानवजगत् सङ्कटमा रहेका अवस्थामा जीवनरक्षक खोप अत्यधिक मुनाफा
अचम्मको परम्परा : मन परेकी केटीलाई अपहरण गर्ने, अनि विवाह !
एजेन्सी । इन्डोनेसियाको पूर्वी भाग बालीको सुम्बा नाम गरेको टापुले विभिन्न सांस्कृतिक परम्परालाई निरन्तरता दिइरहेको
युवतीले गरिन् खानाको अनलाइन अर्डर, डेलिभरीका लागि पुगे ४२ जना केटाहरु !
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण विश्वभर अनलाइन सपिङ्ग र अनलाइन डेलिभरी रोजाइको विषय बनेको छ